आज देशभर कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गर्दै, धरानमा डा. शेखर कोईराला आउँदै - Everest Daily News
आज देशभर कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गर्दै, धरानमा डा. शेखर कोईराला आउँदै
धरान । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विरूद्धमा नेपाली कांग्रेसले आज देशभर विरोध प्रदर्शन र सभा गर्दैछ ।
सुनसरीको धरानमा पनि कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने भएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइराला आउने भएको छ । केन्द्रिय सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि विरोधसभालाई सम्बोधन गर्न धरान आउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले घोषणा गरेको कार्यक्रम अनुसार धरानमा विरोध सभा हुने भएको हो । आज (सोमबार) बिहान साढे ११ बजे छाताचौकमा भेला भएर धरान नगरपरिक्रमा सहित विरोधसभा सुरु हुने कार्यक्रम तय भएको छ । विरोधसभामा नेता डा. कोईरालासहित एक दर्जन भन्दा बढी नेताहरुले संबोधन गर्ने बताइएको छ । आजको विरोध प्रदर्शनमा व्यापक सहभागी भएर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमविरूद्ध ऐक्यवद्धता प्रकट गर्न नेपाली कांग्रेस धरानका सचिव श्याम पोख्रेलले आग्रह गर्नुभएको छ ।
सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको आरोप छ । संसद विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा बहसको क्रममा छ । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई कांग्रेसले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ ।